कुनै पनि भागमा कुनै पनि मर्मत वा प्रतिस्थापन सम्भव छैन कम्तिमा एक को प्रयोग बिना छ रेन्च। केही अवस्थामा, भागहरु हटाउन विशेष pullers प्रयोग गरेर। हटाउँदै गर्दा प्राय बारेमा यस्तो विवरण सम्झना बल संयुक्त। तर संसारमा स्पार्क प्लग हटाउन र स्थापना को समयमा सक्रिय एक जो एक दर्जन अन्य स्टेशन ले ले जाना, छन् कि भूल छैन। उहाँको बारेमा आज र हामी कुरा छौँ।
एउटा सानो धातु प्रमुख polyhedral आकार छ जो उपकरण - स्पार्क प्लग रिमुभर। सुविधा लागि, ह्यान्डल यो जोडिएको छ। यस्तो मैनबत्ती प्रमुख, तपाईं पहिलो फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो उपकरण छिटो हुन र सही ढंगमा inoperative निकाल्न सक्छन् स्पार्क प्लग।
मैनबत्ती कुञ्जी पहिलो उपकरण को रूप लिन्छ जो दुई समाप्त, छ र दोस्रो एक ह्यान्डल रूपमा प्रयोग गरिन्छ। फोटो मा हामी यो भाग एक हेक्सागोनल ट्यूबलर आकार छ हेर्नुहोस्। यो टिप्पण मात्र यस्तो डिजाइन अन्य उपकरणहरू संग सम्पर्कमा आउने बिना unobstructed परिक्रमणगर्दैछ भागहरु अनुमति लायक छ। एक सरल खुला अन्तमा उपकरण, तपाईं त छिटो र सजिलै यो वस्तु हटाउन सक्षम हुन असम्भाव्य छन्।
साथै, ह्यान्डल एक कब्जा यन्त्र जडान छ, सुधार टी आकारको मैनबत्ती प्रमुख 16 मिमी बारे मा भूल छैन। यसको डिजाइन सबैभन्दा टाढाको ठाउँमा भएको संयन्त्र फुकाल्नु गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, टी आकारको प्रमुख सुरक्षित रूपमा प्लग को खोक्रो ट्यूब मा, जसबाट निष्क्रिय परिक्रमा खींचने को संभावना हटाइ फिक्स। साथै, यस उपकरण यसको परिक्रमा र स्थापना गर्नु अघि नयाँ भाग समाधान गर्न सक्छन्। यसरी, टी आकारको उपकरण प्रयोग झर्ने इन्जिन कक्ष भित्र अनधिकृत वस्तुहरूको जोखिम समाप्त। तपाईं 100 प्रतिशत भनेर सेट भने आफ्नो मैनबत्ती फुटपाथ मा गिरावट छैन निश्चित र मोटर एकाइहरु मार्फत पारित तेल मा दाग छैन हुनुहुन्छ।
एक Stripper को टाउको विशेष बनेको छ कठोर स्टील, को संयन्त्र को चिरकालीन कार्यका लागि एक ग्यारेन्टी दिन्छ जो। पनि प्रमुख सतह हामी भने छ रूपमा, मैनबत्ती को अचानक गिरावट गर्दा मुद्दा प्रवेश, स्क्रोलिङ को संभावना समाप्त जो जस्ता, ढाकिएको र छ। प्रयोग जस्ती पत्र एकदम जो पनि उपकरणको स्थायित्व सकारात्मक प्रभाव भएको उपकरण, को जंग को जोखिम कम गर्छ।
क्षणमा, प्रमुख 16-मिलिमिटर स्पार्क प्लग 70 500 rubles देखि मूल्य मा खरिद गर्न सकिन्छ। यी पारंपरिक उपकरणहरू ट्यूबलर वा जटिल टी आकारको उपकरण हुन सक्छ। साथै, मूल्य निर्माता फरक हुन सक्छ थुप्रै तरिकामा (कहिले काँही तपाईं ब्रान्ड लागि विशुद्ध तिर्न)।
तपाईं मात्र मैनबत्ती प्रमुख किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, सबैभन्दा महंगा उपकरण खरीद द्वारा निर्देशित छैन, अनि "सुनको मतलब" को सिद्धान्त प्रयोग गर्नुहोस्। यो उपकरण खरिद गर्ने मैनबत्ती गर्न कारखाना चिल्लो देखि साफ गर्नुपर्छ पछि अचानक पाइप बन्द उतर। भविष्यको लागि, प्रमुख भित्र पानी रोकन, एउटा बन्द बाकसमा राखिएको हुनुपर्छ भनेर सम्झना।
जोर असर: डिजाइन, मूल्य प्रतिस्थापन
Hunchback "Zaporozhets" - उहाँले पनि प्रेम थियो
टाटा सोलारिस - मिलाउने व्यक्तित्व जोड
वसन्त मा dahlias कसरी रोपेर गर्न? फिड dahlias वसन्त?
सूर्यका - एक उपहार चाँदीको लटकन। सेन्ट पीटर्सबर्ग, मास्को, Nizhny Novgorod मा निलम्बन कहाँ प्राप्त गर्न?
एक हुड संग कृत्रिम फर बाट एक फर कोट को पैटर्न। एक हुड संग फर फर कोट (भेडास्कट कोट)
कैरेट हीरा, को उपस्थिति र मूल्य को इतिहास।
फिल लुईस - अमेरिकन अभिनेता, निर्देशक, मिस्बी को भूमिका को प्रदर्शन
एक विद्रधि के हो? लक्षण
"Daewoo Nexia": निर्दिष्टीकरण, डिजाइन र मूल्य
पार्क "स्विट्जरल्याण्ड", Nizhny Novgorod
शङ्घन के हो, वा कसरी मीठो कपाल हटाउने
नाक मा Staphylococcus Aureus: विकृति गम्भीरता
Georgy Guryanov: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, परिवार